Ogaden News Agency (ONA) – Wacdarihii OYSU Hallstahammar ee Sweden
Wacdarihii OYSU Hallstahammar ee Sweden
Ururka OYSU Sweden faraca magalada Hallstahammar ee wadankaasi ayaa soo bandhigay wacdaro aan horay loo arag, kadib markii ay ka soo qayb galeen xaflad dawlada hoose ee magaladan Hallstahammar ay soo qabanqaabisay islamarkaana loogu tala galay in wadankasta uu soo bandhigo waxa uu dhaqan u leyahay sida cuntada iyo hidaha-iyo dhaqanka.
Xafladan oo sanadksta lagu qabto Xadiiqo banaan oo magaalada korkeeda ah ayaa waxaa ka soo qayb galay laamaha kala duwan ee deegaanka iyo magaalooyinka kale ee ku xeeran. Xafladan oo bilabatay aroornimadii hore ee 29/05/2014 aya waxa khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ahaa siyaasiyin iyo gudoomiyaasha dagmooyinka waxay intooda badan ka hadleen in loo bahanyahay in la xoojiyo is dhexgalka iyo cadaalada madama wadanka ay dad kala duwan ku noolyihiin, in loo bahanyahay in la yareyo cunsuriyada iyo waxii kala fogaansho keenaya.
Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madasha xafladu ka dhacaysay qaar kamid ah Xisbiyada kala duwan ee ka jira wadankan Sweden waxay isku dayayeen in Xisbiyadu soo jiitaan dadki ka soo qayb galay madasha madaama ay soo dhawdahay doorashadii Barlamaanka wadanka Sweden.
Oysu Hallstahammar iyo xubnaha Jaaliyada Ogaden eeSweden oo is kaashanaaya waxay u galeen abaabul baladhan sidii ay ka soo qaybgalshii madasha joogay looga dhaadhicin laha qadiyada Ogadenia isla markaana Xisbiyada ka jira degankan ay qadiyada Ogadenia u gayn lahayeen Barlamanka dhexe ee Sweden, si deeqda lacageed ee Itoobiya la siiyo looga joojiyo.
Waxa sidoo kale madasha lagu qaybinayay waraaqo ku qoran luqada Swedish-ka ah oo faahfahinaya qadiyada Ogadenia iyo tacadiyada lagu hayo shacabka Ogadenia ee dulman. Qadiyada Ogadenia waxay caan ka noqotay wadanka Sweden tan iyo markii 2dii wariye ee uu u dhashay wadankan Sweden lagu xidhay Ogadenia.
Oysu Sweden aya wayadan danbe wada dadaalo iyo wacdaro ka dhana xukumada Gumaysiga Itoobiya, OYSU Sweden waxaa xidhiidh qoto dheer kala dhexeeyaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan wadankan Sweden gaar ahan magaladan Hallstahammar sida ururada Soomaliyeed ,Burundi iyo Eritrea ee ka jira magaladan sidaa darteed waxa u fududatay in ay mudo gaaban ay gadhaan guulo wax ku ool ah wax tar wayna u leh halganka ay JWXO hogaminayso.
OYSU Hallstahammar waxay ka diwaan gashantahay degaanka waxaana loo aqoonsanyahay in uu ka mid yahay ururada ugu caansan uguna wax qabadka fiican ee gobalkan .Waxaa xaflada qayb libaax leh ka qaatay koxda JWXO STAR oo ka dhisan magaldan Hallstahammar kana mid ah xubnaha OYSU Hallstahammar ayagoo soo bandhigay Hees iyo waliba Dhanto ay ayagu ku luuqaynayaan. Ugu danbayntii markii xafladu dhamaatay waxa shir isugu yimid mamulka guud ee OYSU Sweden si loo sii xoojin lahaa guud ahan shaqda iyo tagerada halganka qolo kastana ama farac kastna uu magaldu ka dhisanyahay Barlamankeda ula kulmi laha si qadiyada Ogadenia looga dhaadhicin laha guud ahan wadanka Sweden.